Archive du 29-juin-2021
Governemanta Fa lasa aiza ny minisitra Christian Ramarolahy ?
Hatry ny ela no nivoaka ny resaka fa tsy manatrika Filankevitry ny Minisitra mihitsy ny Minisitry ny angovo Atoa Christian Ramarolahy, ary misy aza mpamakafaka politika iray nilaza tamin’ny 19 martsa 2021,
Nanomboka ny taona 2013 no azo lazaina hoe vanim-potoanan’ny voambolana “fisandratana”. Nokasaina nanomboka teo anefa dia ny hisian’ilay tena antsoina hoe “fisandratana” ara-bakiteny
Rocade d’Iarivo Maro sahady ireo mandika lalàna
Taorian'ny fisokafan'ny lalam-baovao "Rocade d’Iarivo" nanomboka ny 24 jona teo dia efa marobe sahady ireo mpampiasa lalana tsy manara-dalàna ka mety hitarika hatrany amin'ny lozam-pifamoivoizana .
Marc Ravalomanana “Tsipahinay iny didin’ny HCC iny”
Nisy ny fivoriana nataon’ny Birao politikan’ny Antoko TIM sy ireo mpahay lalàna eo anatrehan’ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana mikasika ny sata mifehy ny mpanohitra.
Herinandro mialohan’ny CEPE Azo jifaina ao amin’ny ketrika.com ireo "sujets types"
Herinandro sisa, dia hiroso amin’ny fanadinam-panjakana CEPE isika eto Madagasikara satria amin’ny heriny anio, izany hoe ny 06 jolay 2021 no hanatanterahana an’izany.